महिला अधिकारकर्मीलाई अफगानिस्तानमा बस्न गाह्रो छ - मलाला युसफसाइ, नोबेल पुरस्कार विजेता - HongKong Khabar
महिला अधिकारकर्मीलाई अफगानिस्तानमा बस्न गाह्रो छ – मलाला युसफसाइ, नोबेल पुरस्कार विजेता
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ समय: १८:१८:११
मलाला युसफसाइ २४, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने कम उमेरकी युवती हुन। उनले आइ एम मलाला भन्ने पुस्तक पनि लेखेकी छिन। अक्टोबर २०१२ सालमा तालिबान बन्दुकधारीले स्कुल बसभित्र उनको हत्या गर्ने कोशिश गरेका थिए । किशोरी र महिलाले पनि पढन पाउनु पर्छ भन्ने मागलाई बलियोसंग उठाएको कारणले उनलाई तालिबानले निशाना बनाएको थियो । त्यस घटनामा मलालाको टाउकोमा एउटा गोलि लागेको थियो तर उनी बाँच्न सफल भएकी थिइन। अमेरिकाको सिबिएस टिभीमा नोरा ओ डोनेलले सेप्टेम्बर १६ तारीख लिएको अन्तर्वार्तालाई यहाँ राखिएकोछ। अनुवाद : क्रान्ति सुब्बा ।
प्रश्न: विगत २० वर्षमा प्राप्त महिला अधिकार सम्बन्धि भएको उपलब्धि अब के होला ?
मलाला: विगतको तालिबान सरकारमा स्कुलमा छात्राको संख्या शून्य थियोे । अहिले स्कुलमा बालबालिकाको संख्या बढेको छ। ३९ प्रतिशत विद्यार्थी बालिका रहेका छ्न। अबको स्थितिमा सायद बालिकाहरु स्कुल जान सक्दैनन। अहिलेको अवस्थामा त्यहाँका महिलाहरु सुरक्षित रहन चाहन्छ्न।
प्रश्न : अहिले अफगानिस्तानमा महिलाहरुको अवस्थाबारे तपाईंको त्यहाँ रहने साथीहरूबाट कस्तो खबर आइरहेछ?
मलाला : बालिकाहरु स्कुल जान डराइरहे छ्न। महिलाहरु काममा जान डराइरहे छ्न। तिनीहरु जहिल्यै पनि सेक्युरिटी उपकरणको निगरानीमा हुन्छन। कसरी व्यवहार गर्छन, के लाउछ्न भनेर हेरिरहेका हुन्छ्न। महिला अधिकारलाई निशेध गरिएको छ।
प्रश्न : अहिले अफगानिस्तानको पाठशालामा बालिकाहरु छ्न?
मलाला: मिश्रित रिपोर्टहरु आएकाछ्न। तालिबानले महिलालाई युनिभर्सिटी जान दिएको कुरा देखाउन खोजिएको छ। मैले पाएको रिपोर्ट अनुसार नारीलाई स्कुल जानबाट रोकिएको छ। स्कुलमा नारी शिक्षिका नभएको बहानामा स्कुल जानबाट बन्देज लगाइएको छ। यस्तो किसिमको बहानाबाजीले आखिर महिलालाई नै अवसरबाट बन्चित पार्दछ।
प्रश्न : महिलाहरुलाइ खेलकुदमा भाग लिन मनाही गरिएको छ भनिएको छ। सत्य हो?
मलाला: हजुर सत्य हो। महिलालाई क्याबिनेट , कुनै पनि उच्च ओहदामा जान मनाही गरिएको छ। ठुला बैठकहरुमा महिला संलग्नता वर्जित छ। अफगानका महिला अभियन्ताले विगत दुई दशकमा गरेको योगदान र उपलब्धि सबै अहिले दाउमा परेका छ्न जुन कुरा दु:खद छ ।
प्रश्न : के अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानबाट बाहिरिनु त्रुटि थियो ?
मलाला: मलाई लाग्दैन कि अफगानिस्तानमा अमेरिकाको सैनिक उपस्थितिले समस्याको समाधान गर्दछ। तपाईंले दीर्घकालीन शान्ति बहाली गर्नसक्नु हुन्न सैनिक बलमा। वास्तविक शान्ति त्यसबेला महसुस गर्न सकिन्छ जतिबेला सैनिकको कुनै खाँचो पर्दैन । आफ्नो सुरक्षाको लागि कुनै हातहतियार चाहिदैन।
तालिबान सरकारले जारी गरेको नयाँ ड्रेस कोड : युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरु
प्रश्न : तर अमेरिकाको उपस्थितिले धेरै अफगान केटि र महिलाहरुलाई सहयोग पुगेको छ होइन र?
मलाला : हो मेरो कामना पनि त्यही छ। मानवीय काममा ध्यान केन्द्रित भएको होस, स्थानीय जनता, बालिका र नारीलाई सशक्तीकरण गरिएको होस। यस क्षेत्रमा पनि कामहरु भए विगतमा । त्यही भएर महिलाहरु अहिले अधिकारको लागि सडकमा निस्कन सक्ने भएका छ्न। १९९० को दशकको उत्तरार्धमा स्थिति यस्तो थिएन । अहिले फेरिएको अफगानिस्तान हामीले देख्न सकेका छौँ । यी सबै यस बीचमा महिला अधिकार र शिक्षाको क्षेत्रमा भएको विकासले हो।
प्रश्न : तपाई आतंकवाद विरुद्ध छेडिएको युद्धको आलोचक पनि रहदै आउनु भएको छ। राष्ट्रपति ओबामालाइ भेटेको बेला ड्रोन आक्रमण नगर्न अनुरोध गर्नु भएको थियो ।त्यस बारे केही भनी दिनोस न।
मलाला: म शान्तिपृय मान्छे हो। म युद्धमा विश्वास गर्दिन। आतंकको प्रयोग माथि पनि म विश्वास गर्दिन। वास्तवमा आतंक र युद्धले विश्वको समस्या समाधान गर्दैन । आतंकवादको विरुद्धमा युद्ध लडने कुरा गर्दा हामी मानिसको विरुद्धमा होइन विचारधाराको विरुद्धमा लडनु पर्छ। आतंकवाद विरुद्ध लडिएको यो बीस वर्षको युद्धबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्छ। अमेरिकी र नेटो सैनिक २० वर्ष त्यहाँ बसे तर पनि तालिबानहरु पुन शक्तिमा आए। किनकि यो युद्ध विचारको थियो । र हामीले अतिवादी विचारधारा र अतिवादीकरणको विरुद्धमा शिक्षाको ज्योति बालेर मात्र युद्ध लडन सक्छौं ।
प्रश्न : नारीलाई शिक्षा दिन तालिबानहरु किन डराउछ्न?
मलाला: जब नारीहरुलाई शिक्षित तुल्याइन्छ, जब नारीहरु आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुन्छ्न। इस्लाम धर्मले नारी र पुरुष समान हो भनेकोछ । यो कुरा उनीहरुलाई थाहा छ। नारीले यस्तो कुरा थाहा पाइन भने यसबारेमा प्रश्न गरेर उनीहरुलाई चुनौती दिने छ्न। मेरो विचारमा कुनै पनि किसिमको जागरुकता,शिक्षा र ज्ञानोदय भन्ने कुरा तालिबान र त्यहाँ भएका कुनै पनि अतिवादी विचारधाराको लागि खतरा हो।
प्रश्न : यदि राष्ट्रपति बाइडनलाई भेटनु भो भने तपाईंको संदेश के रहनेछ ?
मलाला: म निश्चितरूपमा महिला अधिकार र नारीलाई शिक्षामा समान पहुँच दिनेबारेमा खडा रहन अनुरोध गर्दछु । उहाँको काधमा ज्यादै ठुलो उत्तरदायित्व छ। हामीले एउटा कुरा भुल्नु हुन्न कि अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी पिडा हुने जमात भनेको नै सर्वसाधारण जनता हुन जसले घर गुमाएको छ, जसले विस्थापित हुनुपरेको छ,जसले पृयजन गुमाएका छ्न र जसले पहिलाको शान्ति गुमाएका छ्न।
प्रश्न : तालिबान नेतृत्वमा गठित सरकारको कुरा गरौं । सरकारमा नारीको सहभागिता छैन, सबै हार्ड लाइनरहरु मात्र छ्न, एफबीआइको कालो सुचीमा परेको मान्छे समेत परेका छ्न। यो सरकार कतिको खतरा छ?
मलाला: तालिबानको इतिहास हामी सबैलाई थाहा छ। उनीहरु नरम लवजमा कुरा गर्न माहिर छ्न। सबैलाई आम माफी दिएको कुरा पनि घोषणा गरेका छ्न। महिलालाई अधिकार दिने कुरा पनि गरेका छ्न। हामीले उनीहरुको विगतलाई बिर्सनु हुन्न। तर म चाहिँ अफगानिस्तानमा बस्न सक्दिन।अहिलेको अबस्थामा महिला अधिकारकर्मीलाई अफगानिस्तानमा बस्न गाह्रो छ। धेरैले अहिले बाहिर तिर नै आफ्नो सुरक्षा खोजिरहेछ्न।
यदि तालिबानले जनताको मन जित्न चाहन्छ्न भने समावेशी सरकार गठन गरेर देखाउनु सक्नु पर्दछ। अहिलेको सरकारको संरचनाबाट भने केहि आश गर्ने ठाउँ छैन।
प्रश्न : तपाई एउटा कलिलो युवतीलाई तालिबानको शासनमा बस्दा कस्तो लागेको थियो ?
मलाला: त्यसबेला महिलालाई बाटोघाटोमा कोर्‍राले पिटिन्थ्यो। बजार जान पनि मनाही थियो महिलालाई । सारा जीवन भयभीत भएर बाँच्नु पर्थ्यो। नारिले पनि शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा होमिदा म माथि आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि मेरो आवाज संसार भरी फैलियो। तर त्यहाँ कतिपय जवान युवती र महिलाहरुले म भन्दा खराब अवस्थाबाट पनि जानू परयो। कतिले यो युद्धको सिलसिलामा ज्यान नै दिए। मलाई त उनीहरुको नाम पनि थाहा छैन ।
प्रश्न : आफ्नो अधिकारको लागि बोल्नेलाइ निशाना बनाइन्थ्यो । अफगान महिलाको सबै भन्दा ठुलो डर तेहि थियो ?
मलाला: मेरो चिन्ता के हो भने अफगान किशोरी ,अफगान महिला , अफगान अल्पसंख्यक आफ्नो आधारभूत मानव अधिकारको निम्ति बोल्दा निशाना बन्छ्न भन्ने हो। आफ्नो स्कुल युनिफर्म लाएर स्कुल जाने किशोरीको पनि मलाई चिन्ता छ।
प्रश्न: यदि जवान अफगान किशोरीले यो अन्तर्वार्ता हेरिरहेका छ्न भने उनीहरुलाई के भन्नू हुन्छ?
मलाला: म सबै जवान युवतीलाई के भन्न चाहन्छु भने सबैले आफ्नो आवाजमाथि विश्वास गरौं । यो कुरा तपाईंको भविस्य र आत्मसम्मान संग जोडिएको छ। तपाईंको मानव अधिकार संग जोडिएको छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईंको आवाजको खाँचो छ। कहिलेकाहीँ संसारले तपाईंको लागि आवाज उठाइदिन्छ तर कहिलेकाहीँ संसार चुपचाप बसिदिन्छ। त्यसकारण तपाईंको आवाज तपाईं आफैले उठाउनु पर्छ।
प्रश्न : हामीलाई थाहा छ जुन समाजले महिलालाई खराब व्यवहार गर्दछ त्यो समाज गरिब र अस्थिर हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा विश्वले के गर्न जरुरी छ?
मलाला: जब प्रत्येक नारीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्दछ्न तब संसारको अर्थतन्त्रमा ३० खरब थपिन्छ। जब नारी शिक्षित हुन्छ्न संसारको आधा द्वन्द घटेर जान्छ, गरिबी घटेर जान्छ, अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ।
प्रश्न : तपाईंको छैटौं शल्यक्रिया भर्खर भएको छ केहि हप्ता अगाडि । अहिले कस्तो छ?
मलाला: अहिले म एकदम ठिक छु। घटना भएको ९ वर्ष भयो। गोलीको असरबाट छुटकारा पाउन केहि समय लागेको थियो ।